မချုပ်ပေးလိုက်ရသောဖိနပ်ကလေး | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
October 10, 2006, 4:11 am Filed under: Essays And Stories ကျမ ခံစားနှစ်သက်တဲ့ ကျမ သိပ်လေးစားရသော မွေးစားဖေဖေ ရေးခဲ့သာ ဇတ်လမ်းလေးတစ်ခုပါ.. တော်လှန်ရေးသမားတို့၏ တောတောင်ထဲက ပြည်သူတို့အတွက် ပေးဆပ်ထားသော ဘ၀တွေကို ပီပြင်စွာ ရေးသားခဲ့တာပါ… နိုင်ငံရေးနဲ့တော်လှန်ရေးဆိုတာ အမြဲတမ်းဒွန်တွဲနေပါတယ်…. တစ်ချို့သော သူများဆိုရင် အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျမတစ်ချိန်က အွန်လိုင်းပေါ်က သိပ်ကိုချစ်လှပါတယ်ဆိုသော မောင်နှမတစ်ချို့ကတောင် နောက်ကျောဓါးနဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုအရာမျိုးကမှ သိပ်မထူးဆန်းတော့ဘူး.. အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းဖော်ပြမယ်… မျက်စိ နားတွေမပွင့်သူကို ကြိုးစားပြောပြပေးမယ်.. မဟုတ်မခံ မတရားတာကို လက်ပိုက်မကြည့်နေနိုင်တော့ နိုင်တဲ့စာပေဘက်က ရေးပေးခဲ့တယ်.. တစ်ချို့ကတော့ ဒါကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ကျယ်တယ်လို့ ပက်ပက်စက်စက်လာဆဲသူတွေလည်းရှိတယ်.. ပြဿနာမရှိပါဘူး.. အချိန်တစ်ခုရောက်ရင် တစ်စုံတစ်ခုဆိုတာ လုပ်ဆောင်ပေးရမှာပဲ…. သူတို့ပြောပုံအရဆို လူမိုက်တိုင်ကို လက်သီးနဲ့ပြေးထိုးသလို နေပြည်တော်မှာ သွားအော်ပေးရမှာလား.. လွတ်လပ်ရေးတော့မရဘူး ထောင်နန်းစံပြီး ဦးနှောက်မရှိတဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုတော့ ကျမ မလုပ်ဘူးလေ… ကိုယ်မှန်းတဲ့ ရည်မှန်းချက်သာလျင် အဓိကပါပဲ.. ထပ်ပြောမယ်.. ကျမက နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ဘူး… ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ပြီး မတရားတာကို မတရားလိုပြောမယ်.. အချိန်ကျရင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကူညီရမယ်ဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်း အသင့်ပါပဲ…. ပါးစပ်တစ်ခု လက်၂ဖက်နဲ့တင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သဘောပေါက်ထား ကိုယ့်လူတို့… မီဒီယာဆိုတာ မရှိရင် နားတွေကန်းနေမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားပါလား.. နိုင်ငံရေးဆိုတာထက် လူယုတ်မာကို တော်လှန်တဲ့ တော်လှန်သူလို့ပြောရင် လက်ခံပါတယ်.. အခု ကျမလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ မွေးစားဖေဖေကိုဝေး ရေးထားသော စာထဲကနေ သွေးထဲကို ခံစားချက်တစ်ချို့ပျော်ဝင်နေမယ်လို့ ကျမယုံကြည်ပါတယ်… တိုင်းပြည်အတွက် မိမိရဲ့ပျိုမျစ်သော လူငယ်ဘ၀ ၊ စည်းစိမ်သုခ ၊ ချမ်းသာမှုအားလုံး အနာဂတ်အားလုံးကို စွန့်ပြီး တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတွေအားလုံးကို အများပြည်သူအပေါင်းက လေးစားချစ်ခင်လျက်ပါ ဖေဖေ…. မိမိတစ်ဘို့တည်းပဲကြည့်ပြီး သူတပါးလုပ်ရပ်ကို လိုက်ရှုံ့ချနေသော လူတွေအများကြီးကြားမှာ ဒီလို တော်လှန်သူတွေက ဆီနဲ့ရေလို သိပ်ကွာခြားလွန်းလှပါတယ်.. အမြဲလေးစားလျက်ပါပဲ…
ကျနော့်တပ်ခွဲ၏တာဝန်ကချေမှုန်းရေးတာဝန်…အီကွေ့မင့်ဘယ်ဘက်ပုခုန်းသိုင်းကြိုးတွင်ချိတ်ထားသော စကားပြောစက်ငယ်မှအသံသည်လဲတိတ်ဆိတ်စွာ…၊ကျနော့်ရဲဘော်များအားနေရာချပြီးသည့်နောက်..ကျနော်လည်းအသင့်အနေအထားဖြင့်ရန်သူလာမည့်အချိန်ကို မျက်လုံးမခတ်တမ်းအာရုံစိုက်လျှက် တောင်ကုန်းဆင်ခြေလျှောအတက်လမ်းလေးအား စူးစိုက်ကြည့်လျှက်….။
၁၉၉၃ခုနှစ်ဘုန်းမော်ကျဆုံးခြင်းနှစ်ပါတ်လည်နေ့တွင် မိုင်းပွန်ကားလမ်း၌ ရန်သူတပ်မှစစ်ကြောင်းကောင်ဗွိုင်တန်းကို
ကျနော်တို့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးအပြန်တွင်.. ရန်သူမှမဲနယ်တောင်တန်းတစ်ခုလုံး တပ်ရင်း၁၅ရင်းဖြင့်
ပအိုဝ်းမိန်းမပျိုများ.. ပအိုဝ်းမိခင်များသည် ကျနော်တို့..တပ်သတင်းဖျောက်ခိုအောင်းသော နေရာထိတိုင်လာရောက်ကာ..
ဘူးသီးခြောက်ရေဘူးများ ၀ါးကျည်တောက်များထဲတွင်ထည့်ကာ လာပေးရှာကျွေးရှာကြ၏။
ကျနော်တို့တွင်မွေးသမိခင်နှင့်မခြားမွေးမထုတ်သည်မှလွဲ၍ သားအရင်းအချာများကဲ့သို့ ကျနော်တို့အပေါ်ကောင်းမွန်သော..
ချစ်ခင်သော. စေတနာပြည့်ဝသောမိခင်များစွာရှိ၏ ထိုမိခင်များသည်ကား. .ပြည်သူတွင်းမှမိန်းမသားများဖြစ်ပေ၏..။
အမေတို့၏မေတ္တာနှင့်စေတနာကိုပြန်တွေးတိုင်းပီတိဖြစ်ရသကဲ့သို့ အမေတို့ဘ၀ညှိုးနွမ်းပင်ပန်းကာ စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်နှင့်
စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ရက်စက်ဆိုးသွမ်းမှုဒဏ်အားခါးဆီးခံနေကြရသည်ကိုကြေကွဲနာကျင်မိ၏..။
ကျနော့်လက်မှချုပ်ပြီးသွားသော.. ပုဆိုးစုတ်ကလေးကိုခေါက်ကာ ကျနော့်ပေါင်ပေါ်တွင် သေချာတင်လိုက်ပြီးနောက်ခါးကိုင်းကာ..
အခါးရေခွက်လေးအား ခန္ဓကိုယ်ကိုင်းကာညာဘက်လက်ဖြင့် လှမ်းယူလိုက်ပြီး..
ဖိနပ်ချုပ်အပ်တစ်ချောင်းလဲငါလုပ်ပေးထားတယ်.. မင်းးလူလည်မကျနဲ့ဟကောင်..၊] ]လုပ်ပါအကိုရာကျနော်မချုပ်တတ်သေးလို့ပါအခုတခါအကိုချုပ်တာကိုအသေအချာထိုင်ကြည့်ထားမယ်..နော်
တပ်ရင်းမှုး၏ယာယီရုံးမိုးကာတဲလေးထဲရောက်တော့.. သက်လေးဆယ်ကျော်ခန့်ရွာသား ဖိုးကြီးတစ်ဦးကလေးငယ်တစ်ယောက်
မိခင်ပျောက်သကဲ့သု့ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေဆဲ.. ဘးတွင်ဝိုင်းထိုင်နေကြသောတပ်ခွဲမှုးများနှင့်တပ်ရင်းမှုး၏မျက်နှာသည်လဲမိခင်သေဆုံးသည့်ကလေးငယ်များကဲ့သို့..
ကျနော်လဲလမ်းလျှောက်စကားပြောစက်ကိုဖွင့်ကာတပ်ရင်းမှုးထံသတင်းပို့ပြီးကိုဇာကမိုအားရဲဘော်ဇော်အောင် ကိုတပ်ရင်းရုံးသို့လိုက်ပို့ခိုင်းလိုက်ကာသစ်ရွက်တို့ကြားမှမပေါ့်တပေါ်ပြာလွင်ကြည်စင်နေသောကောင်းကင်ကြီးကို ဖြေသာဖွယ်ရာများရှိလိုရှိငြားငေးမောခေါင်းမော့ကြည့်ရင်း..။
Can I have the permission to republish the article??
i would like to use for motivation purpose.
Comment by Ka Daung Nyin Thar
October 11, 2006 @ 6:00 pm Reply	ya, bro.. You can republish the article.. Thz
October 12, 2006 @ 1:58 am Reply	ညီမလေး ဂျူး မမေနဲ့ သိတဲ့ ကိုဝေးများဖြစ်နေမလားလို့။ သူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာကြာပြီမို့ မေးလ်လိပ်စာလေးရှိရင်သိချင်ပါတယ်။
Comment by Maydarwii
October 20, 2006 @ 7:09 am Reply	sis tq4this post i really intrest about student army do u know how to supply them how can i contact their fund in m’sia
October 21, 2006 @ 6:59 am Reply	မမမေ မေးလ်နဲ့ပို့လိုက်ပါ့မယ် မမ
မလေးရှားကအကို (ခ) အမ .. ဘယ်သူလည်းတော့ ညီမ မသိပါရှင်…. သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ချင်လို့လား.. မလေးဘက်က အဖွဲ့အစည်းတွေတော့ တအားမသိပါရှင့် .. ထိုင်း ယူအက်စ် ဒိန်းမတ် ဟော်လန်ဘက်က အဖွဲ့တွေနဲ့ပဲသိတယ်.. တကယ်လို့များ သိချင်တယ်ဆို၇င်တော့ လိုက်စုံစမ်းပေးပါ့မယ်.. ကျေးဇူးပြုပြီး မေးလ်ပို့လိုက်ပါ……. မေးလ်နဲ့ပြောပါ့မယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်…..
October 22, 2006 @ 4:13 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI